ईश्वर पोखरेलको घटुवा कि बढुवा ?
ईश्वर पोखरेलको घटुवा कि बढुवा ? प्रधानमन्त्री मातहतका विभाग कि रक्षा मन्त्रालय ठूलो भन्नेमा पोखरेल नै अन्योलमा
कृष्ण गिरी आइतबार, कात्तिक २, २०७७
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२औं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा तीन जना नयाँ मन्त्री थपिए । अर्थमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, सहरी विकासमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला तथा बालबालिकामा लीलानाथ श्रेष्ठ थपिएका थिए ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै क्रममा दुई मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो । महिला तथा बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङलाई सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा यतिबेला पोखरेलको बढुवा कि घटुवा भयो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
नेपालमा यस्तो अभ्यास २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सुरु गरेका थिए । उनले घनश्याम भुसाललाई विनाविभागीय भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने गरी मन्त्री बनाएका थिए । त्यस्तै, शेरबहादुर देउवाले कृष्णबहादुर महरालाई विनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । भुसाल, महरा र पोखरेलको काम एउटै भएको राजनीति विश्लेषकले टिप्पणी गरेका छन् ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेललाई घटुवा गरिएको हो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर अलि अलि भए पनि स्रोत साधनमाथि दोहन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेका हुन् ।
सत्तापक्ष अथवा पोखरेल निकटका व्यक्तिले पोखरेलका विषयमा ‘मन्त्रालय हेरफेर’ भएको तर्क गरेका छन् । तर, पोखरेलको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेकाले ओलीले ‘सेभ ल्यान्डिङ’ गरेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसार्इं भन्छन्, ‘उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेललाई घटुवा गरिएको हो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर अलि अलि भए पनि स्रोत साधनमाथि दोहन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेका हुन् ।’
पोखरेल यतिबेला भवन र च्याम्बर नै नभएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । आफूले सम्हाल्न थालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी ‘सम्मान कि अपमान’ स्वयं पोखरेललाई नै थाहा नभएको भनेर नेकपाका नेताहरूबीच पक्ष विपक्षमा बहस हुने गरेको छ । यस तर्कलाई पुष्टि गर्न सहयोग गर्ने गरी पोखरेलले नै ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘विकसित परिस्थिति र घटना प्रसंगका सम्बन्धमा मानिसहरूका बुझाइ, विश्लेषण, अभिव्यक्ति र टिप्पणी हेर्दै....बुझ्ने कोसिस गर्दै... ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रालयका सचिवहरूको जगेडा राख्ने ठाउँ पनि हो । जसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गराइन्छ । र केही महिना यहीँ राखिन्छ । पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीको सेवा सुविधा दिइनेछ तर उनी बस्ने मन्त्रालय हुनेछैन । उनलाई संयोजन गर्न भनिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै हेर्छन् ।
पोखरेल १४ फागुन २०७४ सालमा रक्षामन्त्री बनेका थिए । उनको चाहना त अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने थियो तर उनलाई दिइएन । यसपछि उनले रक्षामा नै चित्त बुझाएका थिए ।
उनी मन्त्री बनेपछि प्रायः विवादमा मुछिए । उनका अभिव्यक्तिदेखि लिएर कामकारबाही सधैं विवादित बने । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नै फरक मन्त्रालयका बारेमा अभिव्यक्ति दिएर उनी विवादित बनेका थिए ।
सेनाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नदिएपछि उनले सेनालाई ‘लकिरका फकिर’ भएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए ।
२२ मंसिर २०७५ मा उनले कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा चाँडै सार्वजनिक हुने बताए । उनले ७०औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा सो प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रतिबद्धता जनाइएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि हत्यारा सार्वजनिक गरिएन । उनलाई रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरुवा गर्नुपर्ने केही चर्चित काण्डहरू रहेको बताइएको छ–
पोखरेलका सम्धी हुन् उपेन्द्र कोइराला । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् । तर, यो नियुक्ति पोखरेलको दबाबमा दिएको बताइएको छ ।
पोखरेलको जोडबलमा नै कोइरालाले धेरै ठाउँमा नियुक्ति पाएका उदाहरण धेरै छन् । कोइरालाको नियुक्तिको पहिलो यात्रा कम्युनिस्ट सरकारबाट भएको देखिन्छ । २०५१ सालमा कोइरालालाई खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको थियो, यो नै कोइरालाको पहिलो राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसपछि कोइरालाले धेरै संघसंस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाए । जसमा पोखरेलको मुख्य हात रहेको छ ।
फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलको नेतृत्व अथवा संयोजक पोखरेललाई नै बनाइएको थियो । कार्यदलले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कति काम गरेको छ, त्यो त सबै छर्लंगै छ । ओम्नी कम्पनीलाई पोखरेलकै दबाबमा रातारात औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न ठेक्का दिइएको थियो । ओम्नीले महँगोमा खरिद गरेर गुणस्तरहीन उपकरण ल्याएको थियो । जसको विरोध देशभर नै भयो ।
ओम्नीले ल्याएको औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारमा पोखरेलको नाम जोडियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समतिले ओम्नी काण्डको छानबिन गरिरहेको छ । महामारीमा पनि पोखरेलले नीतिगत भ्रष्टार गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
औषधि र उपकरण खरिदमा हस्तक्षेप
ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता स्वास्थ्य मन्त्रालयले रद्द गरेपछि उक्त कामको जिम्मा सेनालाई दिइयो । सेनालाई जिटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिइएको थियो । तर त्यसमा पनि पोखरेलले आफ्ना मानिस खटाउन खोजे, जसका कारण सो विषय पनि विवादित बन्यो । त्यस्तै, सेनाले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसपछि सेना पछि हटेको थियो ।
नेपाली सेनासँग केही दिन पहिलाबाट पोखरेलको खटपट सुरु भयो । यसको मुख्य विषय थियो– फास्ट ट्र्याकमा पोखरेलले नियुक्त गर्न खोजेका परामर्श विज्ञलाई सेनाले नियुक्त गरेन । जब कि पोखरेल यसमा पनि आफू अनुकूल मानिस नियुक्त गर्न चाहन्थे । सेनाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नदिएपछि उनले सेनालाई ‘लकिरका फकिर’ भएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए ।
त्यस्तै, खोकना बुङ्मतीमा प्रशासनिक काम रोकेकाले सेनापतिसँगकाृ बैठकमा पनि चर्काचर्की भएको बुझिएको छ । पोखरेलले त्यही बैठकमा लकिरका फकिर भनेर सेनाको आलोचना गरेका थिए पोखरेलले । यस विषयलाई सेनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पुर्‍याएको थियो ।
कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)को नेतृत्व पनि पोखरेलकै काँधमा छ । सिसिएमसीमा मन्त्रीहरू पनि सहभागी छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले कोरोना भाइरसका कारण दुबईमा अलपत्र परेका २ सय ६६ नेपालीलाई उद्धार गर्न नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज पठाएको छ । तर, जहाज दुबई पुगेर पोखरेलकै कारण रित्तै फर्कियो । यसपछि संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग पनि उनको विवाद भएको थियो । पोखरेलले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नभएको भन्दै जहाज रित्तो फर्काउन लगाएका थिए ।
विभिन्न काण्डमा जोडिएका पोखरेलका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि सेभ ल्यान्डिङ खोज्नुपर्ने नै थियो । जसका लागि उपयुक्त समयमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको हो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २, २०७७ ११:३५
सोमबार, मंसिर ८, २०७७ १७:२१ काँग्रेस विपक्षीकै भूमिकामा बस्छ : नेता सिंह
सोमबार, मंसिर ८, २०७७ १६:२७ वडासम्म इन्टरनेटको सहज पहुँच पुर्‍याउने काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छः सञ्चारमन्त्री
सोमबार, मंसिर ८, २०७७ १४:३५ सरकारविरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह